Tsenan'ny Fitantanam-pitaterana Arabo: Malaza amin'izao fotoana izao ny marika fizahan-tany etika
Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » Tsenan'ny Fitantanam-pitaterana Arabo: Malaza amin'izao fotoana izao ny marika fizahan-tany etika
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Vaovao farany UAE
Tsena fitsangatsanganana arabo Dubai
RX Global, mpikarakara ny Arabian Travel Market (ATM), dia nanambara fa ny taona 2022 dia mety hanatri-maso ny fitsanganan'ny mpandeha amin'ny marika, taorian'ny fanehoan-kevitra azony avy amin'ireo solontena nanatrika ny seminera manokana sy virtoaly 2021 momba ny fizahantany tompon'andraikitra.
Ny valin-kafatra avy amin'ny seminera fizahan-tany tompon'andraikitra 2021 dia namaritra ny mety ho fironana amin'ny tsena miaraka amin'ny faharetana sy ny fanentanana ara-tsosialy ao am-pon'ny fototra.
Ny trano fandraisam-bahiny, ny zotram-piaramanidina ary ny toeram-pialan-tsasatra dia tsy maintsy miaina sy miaina ny soatoavina marika.
Ny lisitra Google vaovao dia hahatonga ny hotely hanamarina ny fahazoan-dàlana momba ny tontolo iainana.
"Ny fanehoan-kevitra azonay dia nahafahanay hamantatra ny mombamomba ny mpandeha iray, izay mikaroka mazoto amin'ny marika etika harahina ary te hahita porofo mivaingana momba an'io marika io izay mampihatra izay lazainy.
"Ity mitsangana mety ity dia mampiseho fitambarana toetra mampiavaka ny mpitsangatsangana ivelan'ny trano, ny fahasalamana, ny fizahan-tany ekolojika, ny mpifindrafindra monina amin'ny 'asa', ny mpizaha tany manana traikefa ary ny mpandeha amin'ny fiaraha-monina," hoy izy. Danielle Curtis, Tale fampirantiana ME, Tsena fitsangatsanganana arabo.
"Mazava ho azy fa hampiseho ity fironana mipoitra ity izahay mandritra ny hetsika hybrid 2022 izay atao mivantana sy mivantana ao amin'ny Dubai World Trade Center amin'ny 8-11 May 2022, miaraka amin'ny andiany virtoaly amin'ny 17 sy 18 Mey 2022.
“Mbola noforonina ny fandaharan'asa fihaonambe ho an'ny ATM 2022 saingy efa manana fotoam-pivoriana izahay hamahana ireo fanamby atrehin'ny zotram-piaramanidina, hotely ary toerana hafa, tsy ho ela, toy ny fahasalamana sy fiarovana, teknolojia ary fitoniana eo amin'ny fahasalamana, fanabeazana ary toekarena. fahafahana”, hoy i Curtis.
Nandritra ny seminera momba ny fiaramanidina tao amin'ny ATM 2021, ny manam-pahaizana dia nahatsapa fa fialan-tsasatra fohy izany, ny fanomezan-danja ny mpandraharaha mora no ho tafarina voalohany taorian'ny areti-mifindra. Na dia toa mbola izany aza no zava-misy, azo antoka fa tsy ho voafetra amin'ny toerana iray ihany ity ampahan-tsena vao misondrotra ity, mety hifidy toerana fiantsonana lavitra kokoa ary hijanona mandritra ny fe-potoana lava kokoa, mifanelanelana amin'ny fotoana fiasana.
"Ny tsipika ambany eto dia tena mitovy. Ireo mpizahatany ireo dia mbola te hahita marika manolo-tena amin'ny fahasalamana sy fiarovana ary porofo mivaingana amin'ny paikady maharitra toy ny fanamarinana miaraka amin'ny fikambanana tsy miankina, "hoy i Curtis.
Mba hanamafisana izany fitakiana izany, araka ny angon-drakitra momba ny tsena ao amin'ny Statista, 81% amin'ny olon-dehibe 29,349 nohadihadiana tany am-piandohan'ity taona ity, manerana ny firenena 30 dia nanamafy fa te hijanona ao amin'ny toeram-pialan-tsasatra maharitra izy ireo, farafaharatsiny indray mandeha ao anatin'ny 12 volana mialoha. Dimy taona lasa izay, ny 62%-n'ireo namaly ihany no nanao fanambarana mitovy.
Hitan'i Google tokoa fa nitombo avo efatra heny ny teny fikarohana hoe “hotely maitso” tato anatin'ny 18 volana lasa raha ny habeny. Noho izany, mba hanampiana ireo mpizaha tany amin'ny tontolo iainana, Google izao dia hanome alalana ny hotely misy marika eco-emblem maitso eo akaikin'ny anarany mandritra ny fikarohana mahazatra. Hanampy antsipirihan'ny politika momba ny faharetana manokana sy ny fomba fiasa ary ny hetsika ihany koa izany. Mba hahafeno fepetra, ny hotely dia tsy maintsy amarinin'ny antoko fahatelo azo itokisana ny zava-bitany.
"Hanome mangarahara bebe kokoa ho an'ireo mety ho vahiny izany ary hanampy amin'ny fanomezana valisoa ny hotely amin'ny zava-bita marina momba ny tontolo iainana," hoy i Curtis.
Travel Forward, hetsika manerantany ho an'ny teknolojian'ny fitsangatsanganana izay manasongadina ny teknolojia farany amin'ny taranaka manaraka ho an'ny dia sy ny fandraisana vahiny, ny forum mpividy ATM ary ny hetsika tambajotra haingana, ary koa ny ARIVAL Dubai @ ATM. Amin'ny alàlan'ny andiam-webinars dia mirakitra ny fironana ankehitriny sy ho avy ho an'ireo mpandraharaha mpitety faritany sy toerana manintona ity forum natokana ity izay mifantoka amin'ny fitomboan'ny fandraharahana amin'ny alàlan'ny varotra, ny teknolojia, ny fizarana, ny fitarihana eritreritra ary ny fifandraisana amin'ny ambaratonga mpanatanteraka.
Ny ATM 2022 koa dia hampiantrano fihaonambe natokana ho an'ny Global Stage, mandrakotra ny fiaramanidina, hotely, fizahan-tany ara-panatanjahantena, fizahan-tany antsinjarany ary seminera fampiasam-bola manokana momba ny fandraisana vahiny. Handray anjara amin'ny ATM indray ny Global Business Travel Association (GBTA), ilay fikambanana ara-barotra fitsangatsanganana sy fivoriana voalohany eran-tany. Ny GBTA dia hanolotra ny votoaty fitsangatsanganana ara-barotra farany, fikarohana ary fanabeazana mba hamerenana ny fanarenana sy hanohanana ny fitomboan'ny fitsangatsanganana ara-barotra.
Arabian Travel Market (ATM), amin'izao faha-29 taonany izao, no hetsika iraisam-pirenena fitsangatsanganana sy fizahan-tany any Afovoany Atsinanana ho an'ireo matihanina amin'ny fizahantany miditra sy mivoaka. ATM 2021 nampiseho orinasa maherin'ny 1,300 avy amin'ny firenena 62 manerana ny efitrano sivy ao amin'ny Foibe Ara-barotra Iraisam-pirenena Dubai, miaraka amin'ireo mpitsidika avy amin'ny firenena 140 mahery nandritra ny efatra andro. Arabian Travel Market dia anisan'ny Arabian Travel Week. #IdeasArriveEto
Hetsika manokana manaraka: Alahady 8 Mey hatramin'ny Alarobia 11 Mey 2022, Dubai World Trade Center, Dubai.